トップページ ＞ 言語 ＞ ズールー語 ＞ Horukon Works
Uma ungazi kahle, sasemakhazeni pachinko kule Horukon is, kubonakala abanye abantu bacabanga ukuthi ayikho emthethweni, ezifana kude, original awuwona ngempela umshini into enjalo. I Horukon, iyona isifinyezo kuneHol ikhompyutha. Ekhuluma
yini ukwenza umshini we, kukhona izinjongo ezimbili cishe ihlukaniswe. Futhi lokho eza ukusivumela up by aggregating etafuleni idatha, ezifana yokuthengisa inzalo enkulu futhi yenzeka, kuzoqhubeka kuze ukuqapha sokukhwabanisa. Kafushane, I Horukon, kuyoba yokuthi umshini ephethe idatha. Okokuqala, kuba idatha, umshini ngoba ukusivumela up idatha Horukon isifakiwe kwenye platform eyodwa. Donsela wiring kusukela
ume, it is a indlela ezifika idatha ngawo ukuxhuma kumshini. Woza idatha ukuthi phezulu, futhi yokuthengisa inzalo enkulu etafuleni ngalinye, inani ukushayela kuso, idatha adingekayo ibhizinisi, ezifana ibhola unit price zokuthengisa kwamanye, Horukon is esamukele isiginali kusuka etafuleni, kuyothiwa ukusivumela up in real-time .
hhayi esisodwa nje ngomunye idatha, idatha ethile noma idatha kanye imodeli yalesi siqhingi iyunithi, sesiye njengoba kungabonwa izitolo yonke idatha.
Kusukela idatha ukuza sangempela, sokuhlupheka, esingazanga sibe lapho kukhona ukuntuleka wiring futhi isibe kungenzeka ngokushesha uqaphela. idatha yokuthengisa okunjalo, ngokuya empeleni enza ibhizinisi, kuthanda wena idatha ngampela.
kule nombolo esekelwe, ngicabanga ibhizinisi ezifana ngosuku olulandelayo izinzipho izinguquko kanye nezilungiselelo. Ngamanye izimboni, ngicabanga uma kungekho idatha yokuthengisa ngosuku olulandelayo yebhizinisi uhlelo akuyona esakhiwe, kodwa ndawonye emakhazeni pachinko. Lapho
akukho idatha, yebhizinisi ngeke bakwazi nhlobo. Njengoba besho
ezitaladini, noma ungakwazi ukulawula ngamunye Horukon, zibonisa njengathi ukulawula ngokukhululekile uma Uchikome yokuthengisa umgomo hhayi ifakwe.
※ Nokho, Futhi ukuzwa inkulumo of pachinko eshintsha futhi ngokuvamile zisebenzisa Horukon ukuthi anemisila imisebenzi enjalo. It is uya uthwebule ngoba inzuzo iqiniso liwukuthi Horukon lungabanjwa indlela.